Pedro Munoz Seca. Zvakanakisa zveDon Mendo's Revenge | Zvazvino Zvinyorwa
Pedro Munoz Seca. Zvakanakisa zveDon Mendo's Revenge
Pedro Munoz Seca akafa pazuva rakaita nhasi 1936. Iye munyori uye munyori wemitambo kubva kuCádiz, iri ye Chizvarwa che14 o Novecentismo uye mugadziri wemhando yake yekunyora inozivikanwa se astrakhan, anorangarirwa kunyanya Kutsiva kwaDon Mendo. Izvi zvimwe zvezvimedu zvakasarudzika zveimwe yeiyo Akakurumbira uye anosetsa comedies yeSpain theatre.
Kutsiva kwaDon Mendo
Kune mamwe mashoma anozivikanwa uye anomiririrwa ma comedies kupfuura aya, ayo chokwadi isu tese takaona zvirinani mune ayo mazhinji magadzirirwo mufirimu neterevhizheni. Zvanga zviri yakaburitswa in the Madrid Comedy Theatre muna 1918 uye kubudirira kwayo kwaive kwakakura zvekuti ndiyo iyo chechina chinomiririrwa basa wenguva dzese pamwe ne Don Juan Tenorio, Fountainovejuna y Hupenyu kurota. Izvi zvimwe zvidimbu zvakasarudzwa.
Kunonyanyisa kuburitsa kwe astrakhan, comic genre yakagadzirwa naMunoz Seca uye izvo zvinongo kunyepedzera kukuseka iwe zvakadaro. Iyo rongero, mamiriro ezvinhu, mavara, uye kunyangwe zvirevo kana montage, gara uchitsvaga iyo joke, iyo inowanzo kuve muchimiro chepun kana comic deformation yemutauro.
Kutsiva kwaDon Mendo ndizvo rakakamurwa kuita zviito zvina, izere puns uye kurova kunosekesa iyo muganho pane zvisina musoro. Unrivaled parody yemutambo wenhoroondo, Inobatanidza anachronisms neiyo yakapusa kuseka asi iyo inoshanda. Uye inoramba ichidaro kuburikidza nemakore.
Don Mendo kuMagdalena
Uye ini ndinokanzura uye ndinonetseka
kana kuvanza kutyisa kwangu,
nekuti kunyangwe zita racho richikushamisa,
anoshanda seizvi ane zita,
uye iro zita ndi ... pimp.
Don Nuño kuna Magdalena
Mari yako yakakurisa, sehupfumi hwangu,
uye mbereko yako yakakwira kwazvo,
Ndiro dzinza redu kubva kubazi rakakura kudaro,
kuti ini ndakanyora izvi mushongwe yangu muPorcuna:
«Mucheche weMonso de Jarama,
nekusava nekureba, kunge pasina,
kudarika kuberekwa, iti ndiwo mubhedha ».
Chivabvu gumi nenhatu ikozvino!… Ndiani angadai akafunga!
Ndave mujeri rino kwemwedzi nezuva
pasina munhu anoziva zvinoitika ...
Uye nhasi Chipiri, Mwari mukuru! ... Chipiri chegumi nematatu!
Nei kutya kuchipinda mumweya wangu?
Nei ichindikurudzira nekutya kunoshamisa
iyo nhamba, maiwe, kubva pakarenda?
Ah, kwete, munhu anouraya!… Hauzonyadzisa
kukosha kwaDon Mendo; hauzokwanisi;
zvakafanana kwandiri uchave ...
Gumi nematatu, gumi nemana, gumi nemashanu negumi nematanhatu!
Ndizvo zvandiri kutaura zvakanyanya,
mhandara, ndiani asina kundinzwisisa?
Hauna kunditarisa hauna kundinzwa here?
Wakandiratidza zvisina hunhu kudaro
kuti wakangondiona nekundivenga?
Don Mendo (kuna Renato)
vila, mukadzi uye unzwe iye;
asi pandakamutarisa zvakanyanya
uye kunyanya pandainzwa
zvishoma, maam, ndazviwana.
Zvese kwandiri kunge mamvemve,
uye nekunyepedzera kumwe ...
Nhamo, murume asina mufaro
ndiani akaberekwa, seni, akanaka kudaro!
Azofaifa kuna Don Mendo
Dzinga simbi yako munyama yangu! ...
Satiate kutsiva kwako kwandiri
Kana iwe usingafanire kundida izvozvi!
Kukuvara, Mendo, naAllah!
Chii naAllah: pamusoro apa!
Ziva chinonzi menda ... ndiDon Mendo
naDon Mendo ... vakauraya menda.
Uye ini ndinopedza nhaurirano yakakurumbira nezve mutambo pa7: XNUMX.
Don Mendo naMagdalena:
… Tinotaura… Uye unoitei?
Zvinondinetsa ... Uye Vedia
Iye ndokuti: Haungabhowekana.
Ndinofunga, kana uchida,
tamba pahafu yapfuura minomwe.
Uye nei iyo nguva yakamaka
zvakashamisa? Zvinogona kuve gare gare ...
Ndiko kuti kusava nemhosva kwako kunofuratira
iyo inopfuura awa, mukadzi,
Hafu yapfuura minomwe mutambo.
Uye mutambo wakashata
kuti haufanire kuridza bofu,
Zvakanaka, iwe unotamba zana, chiuru,
uye kune chiuru, unoona kupisa
kuti pamwe unopfuura kana kuti hausvike.
Uye kusasvika kunopa marwadzo,
inoratidza kuti mitengo yakaipa
uye iwe unobva kune mumwe ane chikwereti.
Asi une nhamo iwe kana ukaenda uko!
Kana iwe ukaenda, zvakatonyanya!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Pedro Munoz Seca. Zvakanakisa zveDon Mendo's Revenge
Frank Yerby. Mabhuku akanakisa eAfrican American novelist